रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - अन्य - कागजात tab
अनुच्छेद सङ्ख्या र/वा अनुच्छेद नाम घुसाउनुहोस्.
हालको कागजातको फाइलनाम र/वा निर्देशिका बाटो घुसाउनुहोस्, विस्तार बिनाको फाइलनाम जस्तै.
हालको पृष्ठ सङ्ख्या घुसाउनुहोस्, अघिल्लो, वा पछिल्लो पृष्ठ.
यदि तपाईँंले सन्दर्भ फाँटहरूका लागि ढाँचाको रूपमा "अध्याय सङ्ख्या" रोजेमा,सन्दर्भ वस्तुहरू सम्मिलित अध्याय हेडिङको सङ्ख्या फाँटमा प्रदर्शन हुन्छ। यदि अध्याय हेडिङका लागि अनुच्छेद शैली क्रमाङ्कित नगरिएमा,फाँट खाली रहन्छ।
मिति र समय फाँटहरूको HTML निर्यात र आयातका लागि, स्पेसल LibreOffice ढाँचाहरू प्रयोग गरिन्छ.
अफसेट प्रविष्ट गराउनुहोस् जुन तपाईँं मिति र समय फाँटका लागि लागू गर्न चाहनुहुन्थ्यो.